Usayizi waphansi: 7895.279 Sq feet
I-Flat enikelwayo kungenzeka ikhethe kahle wena. Uzothola amanani emakethe amanje akhanga kakhulu eBahria Town Rawalpindi. Umthengisi usethe intengo ebuzwayo enengqondo kakhulu ku-Rs 18,000. Ufuna impahla yezinhloso eziningi? Yebo, yeka ukusesha ngokuqhubekayo, ngoba le Bahria Town Phase 7 inayo engcono kunazo zonke okwamanje. Singaqinisekisa ukuthi ayikho impahla engcono etholakalayo yokuqasha kuyo yonke indawo. Unentshisekelo ezakhiweni ezingamamitha ayi-650 ezinyawo? Nansi inketho ethandwayo. Imininingwane ebalulekile yesakhiwo ibhalwe ngezansi. Isimo somoya esimaphakathi ukuze usindiswe emlilweni oshisayo wezinyanga zasehlobo. Hlala uthokomele ekhaya lakho ngenxa yohlelo lokushisa oluphakathi nendawo. Akudingeki ukhathazeke ngokulahlwa kukadoti endaweni yakho entsha. Isivele inakekelwa. Lesi sakhiwo sifaka indawo yokwamukela izivakashi eyenziwe kahle. Ngeminye imininingwane, sishayele manje!